Qadar oo shaacisay lacagta ku baxeysa dhismaha dekadda Hobyo
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiirrada dekadaha Soomaaliya iyo Qatar, Maryam Aweys Jaamac, iyo Jassim Bin Saif Ahmed Al Sulaiti ayaa si wadajir ah maanta u shaaciyay in la billaabayo dhismaha dekadda Hobyo ee goblaka Mudug.
Al Sulaiti, oo war-fidiyeenka u waramay ayaa shaaciyey in ay qaab casri ah u dhisayaan marsadaasi, isla markaana ay ku baxeyso aduun lacageed dhan 170 milyan oo dollar-ka Mareykanka.
Maryam Aweys Jaamac ayaa caddeysay in billaabidda dhismaha dekadda Hobyo ay muhiim u tahay shaqo abuurka dhallinyarada Soomaaliyeed iyo horumairnta dhaqaalaha dalka.
Horraantii bishii Deseembar ee sannadkii 2018 ayaa dowladaha Soomaaliya iyo Qatar waxa ay magaalada Dooxa ku lala saxiixdeen heshiisyo horumarineed oo ay kamid tahay dhismaha dekadda Hobyo.
Xiligaasi, wasiirka dekada Qatar, oo kulan gaar ah la qaatay Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre, ayaa wuxuu uu ballan qaaay in dowladda Qatar sida ugu dhaqsiyaha badan u billaabeyso mashruuca dhismaha dekadda.
Soomaliya 24.02.2018. 15:59
Gollaha Shacabka ayaa waxaa wali ka banaan labo Kursi oo Xildhibaanadii ku fadhiyay ay....
Dhageysiga kiiska laba eedeysane oo kusoo idlaatay Dhuusamareeb
Soomaliya 23.11.2019. 11:44
Xildhibaan lagu dilay magaalada Muqdisho
Soomaliya 22.11.2017. 16:34
War Murtiyeed laga soo saaray Khilaafka Galmudug [Akhri]
War Saxaafaded 28.09.2017. 19:52
Khayre oo u safray Qadar xili maamulada qaar ay xiriirka u jareen DF
Soomaliya 01.06.2019. 12:18